Baayoo Gaazii – siifsiin
Gosa Bukeessa Baayoo Gaazii
Yeroo dabre,barruu keenya jildii 9ffaa keessatti waa’ee dubartoota sadii baayoo gaaziidhaan fayyadamuun bu’aa argatani kaafnee isin dubbisiisneerra.Jildii 10ffaa kana keessattimmoo waayee gosa dhaaba ykn ijaarsa baayoo gaazii baayi’ee filatamaa ta’e ilaalla.
Biyyoota ol guddataa jiran keessatti gosooti baayoo gaazii beekamoo ta’an lamadha.Inni tokko iddoo hinsochoonerratti kan tolfamu yoo ta’u,inni kaanimmoo bifa barmeelii ykn gaanii iddoo barbaadanitti kan sochoosanidha.
Biyyoota guddatan keessatti bifni addaa akkaataan itti qixaayee ijaaramu madaallii gaariin, filannaan qiyaasaas hubannaa keessa gala.
Ijaarsa baayoo gaazii iddoo hinsochoone irratti tolfame
Baayoo gaazii iddoo hinsochoone irratti ijaaruuf baasii maallaqaa barbaachisu yoo hubanne, isa kaan irraa xiqqaadha.Kun qaama asiifi achi socha’u waan hinqabneef salphaatti ijaarama.Sibiila ligidaa’u danda’u of keessaa waan hinqabneef,yeroo dheeraa (hanga ganna diigdamaa ol )tajaajiluu danda’a jedhamee tilmaamama.Ijaarsi kun lafa keessatti hojjetama waan ta’eef miidhaan(badiin) irra ga’uu hindanda’u.Iddoos ni qusata.
Boolli keessatti bukeessan kun lafa keessatti gadi-qotamee hojjetamu bu’aansaa; yeroo obonboleettiin ka’u,yeroo gannaa diilalla,haala qabbanarraa akkasumas yeroo howu’a aduu immoo bulluquuf yeroo dheeraa fudhata waan ta’eef jijjiiramni qilleensaa miidhaaa irraan hinga’u.
Iddoon boolla keessatti baayaayoo gaazii itti bukeessan kun humna namaarratti waan hundaa’eef namoota baayi’eef carraa hojii argamsiisa.Boolla baayoo gaazii keessatti bukeessan kana yeroo hojjechuuf (qopheessuuf) ogeessota hojii kanarratti muuxannoo qaban irraa gorsa gaafachuun barbaachisaadha.Kana malees kan qophaa’e kana ogeessota hojii kanaaitti agarsiisuun kasaaraarraa nama oolcha.Gaazii ukkaamsee qabachuu akka danda’uf qaawwaa ykn baqaqaa utuu hinqabaannetti, beektoonni ijaarsaa boolla baayoo gaazii bakka jiranitti yoo qophaa’e irra gaariidha.
Meeshaaleen kana qopheessuuf barbaachisan suuraa kanaa gadii irratti agarsiifamaniiru.
Suuraa 1ffaa Boolla baayoo gaazii
Walitti makuuf kan gargaaran gaanii (barmeelii)fi gingilshaa (calaltuu) hujummoo cirrachi akka itti hinseenne ittisu
Meeshaa walitti makee bukeessu
Meeshaa baqaqaa walitti qabu
Seensa kuusaafi qadaaddii gaaziin akka hin baane cuqqalee qabu.
Bakka siicoon furdaan keessatti kuufamu
Karaa gaaziin bahu
Iddoo waan hojetamaa jiru hunda bakka tokkotti agarsiisu ,
10 Saaphaphuun ciccitee bifa baayi’een uumama
Meeshaan dhaabbataan baayoo gaazii waaninni dimshaashatti ofkeessaa qabu;bifa buphaatti ykn. gaaniitti kan bocame(tolfame) iddoo itti dafee walnyaatee bukaa’u,iddoo tokkoo kan hinsochoone,gaaziin kan keessatti kuufamu.,boolla itti qoodan ykn barmeelii itti hiran qaba.Gaaziin qaama meeshichaa gara ol aanu keessatti kuufama.
Yeroo gaaziin oomishamuu jalqabu,dhoqqeensaa gara meeshaa isaa qophaa’eetti cuunfamee seena.Hunmi gaazii(dhiibbaan) baayi’ina gaazii sassaabamee wajjin deema;wol-gita.Yeroo gaaziin sassaabamee baayi’atu humni gaazii akkasuma dabala jechuudha.Kanaafis dhoqqee beelladaa ykn. Baayi’ina faltiitu murteessa. Yoo dhoqqee(faltii) xinnootu boolla gaazii keessa jira ta’ee,humni gaazii akkasuma xinnaata.
Baayoo gaaziin meeshaa iddoo hinsochoone irratti hojjetame kan of keessatti qabu: boolla bifa gaanii ykn.okkoteetiin gadi-qotamee tolfamee keessatti bukaa’u, iddoodhaa kan hinsochoone,qodaa gaazii baatuufi,boolla itti qoodan,,maqaa biraatiinis gaanii(barmeelii) hin’ulfaanne,qaba.Gaaziin qaama gara olii qodaa- bukoo keessatti kuufama.Yeroogaaziin oomishamuu jalqabu faltiin bukaa’e gara boolla qophaayeefitti seena.Humniifi dhiibbaan gaazii baayi’ina gaazii meeshaa keessatti kuufamerratti hundaa’a.Jechuunis,faltiin bishaaniin bulbulamee qodaa keessatti guutame tu murteessa. Yoo gaazii muraasatu meeshaa keessa jira ta’e,humni gaasii,(power) akkasuma xinnaata.
Iddoon faltiin (dhoqqeen beelladaa) bishaaniin bulbulamee, walmakee bukaa’ee,bakka tokko dhaabbatu kun yeroo baayi’ee dhagaadhaan ijaarama;simintoofi sibiila qaba.Meeshoti ijaarsaa barbaachisan:
*Teeknika beekumsa gahaadhaan akka hinsochoonetti,gaaziifi bishaan akka ukkamsee qabutti tolchuu.
*Gatii rakasaan hojjechuu dandauu,meeshaalee salphaatti naanno sanatti argamanitti gargaaramuu
*Barmeelii(gaanii) Ogeeyyota ijaarsaa dandeettii qaban hojjechiisuu
Meeshaan (Boolli) baayoo gaazii iddoo tokkotti dhaabame kun yoo gaaziin akka hinfuttaafannetti ijaarame (qophaa’e) hammuma isa lafaa-olitti barmeelli tolfamee gara fedhetti socho’uu danda’u oomishuu caalaa oomishuu danda’a. Haata’ullee malee,gaazii isaatti fayyadamuuf yeroo yaallu, waan humni gaazii si’a tokko cimee,yeroo biraa laafuuf (ol ka’ee gadi bu’uuf) baayi’ee quubsaa hin ta’u.Qodaan manaa, kan akka midhaan ittiin bilsheeffatan,ibsaafi kkf.wal qixxaatanii hintajaajilani.Yoo gaaziin sirriitti humna wal qixa walirraa hincinne akka kennu barbaadame(fkf.mootaraaf) meeshaan humna gaazzii walqixxeessee hiruu ykn qoodaa gaazii baatu ol-fannisuu barbaachisa.
Previous Previous post: Akkamitti milkaa’uun danda’amaa? Tilmaama jabeeffachuu
Next Next post: Seenaa Abdii fi Caalaa